संविधान विपरित काम गर्ने सरकार आफै ढल्छ : डा. मिनेन्द्र रिजाल | सु-सुचित नेपालको चित्र
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार एक कार्यक्रममा सरकार ढाल्ने चेतावनी दिए । संसदमा संख्या र भूमिका दुवै रुपमा कांग्रेस सरकार ढाल्न सक्ने अवस्थामा देखिदैन । सरकारले गरेका के कस्ता काम गलत भइरहेका छन्, जसले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिनुपर्यो रु यिनै वि षयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता सरकार ढाल्ने हुँदै होइन । सभापतिजीले भनेको कुराको अर्थ के हो भने लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भयो भने सरकार आँफै ढल्छ । लोकतन्त्रमाथिको प्रहार रोक भन्ने आशयमा सभापतिजीले त्यसो भन्नुभएको हो । संविधानअनुसार बनेको सरकारले संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर बसेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थ हो । कांग्रेसले त पाँच वर्षसम्म प्रभावकारी प्रतिपक्षको रुपमा काम गर्नुपर्छ । संविधान विपरित काम गरिरह्यो भने सरकार आफै ढल्छ, टिक्दैन । जनताले नै रहिरहन दिदैनन् ।
रोकिएको छ त भ्रष्टाचार रु भ्रष्टाचार बढेको छ कि घटेको छ रु भ्रष्टाचार रोक्नमा पनि सरकार असफल छ । ढ्वाङ फुकेर मात्रै त भएन नि । काम गरेर देखाउन सक्नुपर्यो नि । जनता सन्तुष्ट हुनुपर्यो ।